Tuchel ayaa banaanka iska dhigay Mourinho kadib derbigii London oo ay ku kulmeen labada…. – Hagaag.com
Tuchel ayaa banaanka iska dhigay Mourinho kadib derbigii London oo ay ku kulmeen labada….
Posted on 5 Febraayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Chelsea ayaa ku guuleysatay derbiga caasimada Ingiriiska ee London, waxaana ay garaacday Tottenham fiidnimadii Khamiistii ee wareega 22aad ee Horyaalka Ingriiska, waxay ku sii xoojisay nabarrada kooxda ay xafiiltamaan ee Tottenham, iyadoo wada sii hoobasho tartanka Premier League.
Chelsea, oo gaartay guusheedii labaad oo xiriir ah ee tartanka, ayaa gaartay 36 dhibcood, waxayna soo fadhiisatay kaalinta lixaad ee kala horeynta tartanka, iyadoo 3 dhibcood ka korreysa Tottenham, taasi oo u daadegtay kaalinta sideedaad.
Jorginho ayaa dhaliyay goolka guusha ee Chelsea daqiiqadii 24aad oo ahaa rigoore, halka Tottenham ay ku guuldareysatay inay barbareyso intii ciyaarta ka harsaneyd.
Guushan qiimaha badan ee ay ka gaadheen Tottenham, oo uu tababare u yahay ruug caddaaga Jose Mourinho, waxay sii xoojineysaa kalsoonida tababaraha reer Jarmal ee Thomas Tuchel, kaasoo la wareegay shaqada tababarenimo ee Chelsea ka dib markii Frank Lampard shaqada laga ceyriyay usbuucii la soo dhaafay ka dib markii 5 guuldarro ay ka soo gaartay 8 kulan oo uu ciyaaray taa oo kooxda fadhiisisay kaalinta sagaalaad.
Tuchel ayaa ku guuleystey toddobo dhibcood seddexdii kulan ee horyaalka hal usbuuc uu la qaatay Chelsea, kooxda uu hogaamiyo weli wax gool ah lagama dhalin inta uu hogaanka u qabtay.